रुपा र कृष्णलाई पुत्र लाभ ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचाररुपा र कृष्णलाई पुत्र लाभ !
रुपा र कृष्णलाई पुत्र लाभ !
७ श्रावण २०७७, बुधबार काठमाडौं/ रुपा र कृष्ण वलीको जोडी सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल जोडी हो । उनीहरुको जिवनको संघर्ष मानिसको जिवनका लागि प्रेरणा दिने खालको छ । रुपा र कृष्ण कलियुगका लागि राधा र कृष्णका जोडी हुन् भन्दा पनि फरक पर्दैन ।हाल यो जोडीको लागि निकै ठुलो खुशी प्राप्त भएको छ । यी २ को सन्तान प्राप्ति भएको छ । पहिलो सन्तान स्वरूप जोडीको छोराले जन्म लिएको छ । यो खुशीलाई उनीहरुका सुभाचिन्ताकहरुले पनि सामाजिक संजालमा ब्यक्त गरिरहेका छन् ।
निकै अप्ठेरो अवस्थामा रुपाले कृष्णलाई साथ दिएकी छन् । उनको मायाका कारणले नै कृष्णले आफ्नो जिवनको सबैभन्दा दुखद् अवस्थावाट पार भएका छन् ।उनीहरु अहिले आफ्नो जिवनलाई निकै उ’ल्लासपूर्ण तरिकाले बिताएका छन् । दुर्’घटनामा हात र खुट्टा गु’माएका कृष्णलाई रुपाको माया र साथ नै जि’उने आधार बन्यो । एक अर्कालाई निकै माया गर्ने यो जोडीलाई यति ठूलो दु’र्घटनाले पनि छु’टाउन सकेन । हात खुट्टा गु’माएका कृष्णलाई रुपाले माया, साथ र हौसला दुवै दिइन् ।सामाजिक सञ्जालमा चलेको अभियानका कारण उनीहरुले आर्थिक सहयोग पाए ।
देश र विदेशवाट आशिर्वाद र माया पाए । अहिले कृष्णले कृ’तिम खुट्टा लगाएका छन् । आफ्नो जिवनमा आएको सबैभन्दा खुसीको क्षण सार्वजनिक गर्दै रुपाले आफुलाई आशिर्वाद दिन भनेकी छन् ।उनी ग’र्भवती भएको खबर आफ्ना फ्यानहरुलाई बाँ’डेकी छन् ।आफ्नो दुखको समयमा पनि साथ दिएका शुभचिन्तकहरुका लागि खुसीको कुरा भन्दै उनले ग’र्भवती अवस्थाका तस्बिर सार्वजनिक गरेकी हुन् । ति तस्विरमा हजारौंले ब’धाई दिएका छन् । उनीहरुको खुसीमा खुसी ब्यक्त गरेका छन् ।यो उनीहरुको खुसीमा लाखौं मानिसको साथ समर्थन र सहयोग छ ।
त्यसैले यिनीहरु एक भाग्यमानी जोडी पनि मान्न सकिन्छ । जिवनमा आएको एउटा ठूलो वि’पत्तीको सामना गर्न उनीहरुलाई लाखौं मानिसको साथ र स’मर्थन प्राप्त भयो । सबैको सहयोगका कारण नै यो सम्भव भएको हो । उनले आफ्नो विवाहको तेस्रो वार्षीक उत्सवका अवसरमा यि तस्बिर सार्वजनिक गरेकी हुन् ।